MUUQAAL: Kornayl Qaloombi “Puntland waa ku Fool-xumo, Inay Sanaag Gacanta ka baxdo, Shalay Sool ayaa ka baxday” | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: Kornayl Qaloombi “Puntland waa ku Fool-xumo, Inay Sanaag Gacanta ka baxdo, Shalay Sool ayaa ka baxday”
Mar 13, 2019 - 9 Aragtiyood
Laascaanod ( kalshaale ) Kornayll Maxamuud Cabdi Cumar Qaloombi oo horey xil uga soo qabtay Dowladdi Cabdulaahi Yuusuf Axmed AHN ayaa ka hadlay dulaanka Cusub ee Somaliland qaybo kamid ah gobalka Sanaag ay ku qabsatay.
Qoolombi oo Warbaahinta la hadlayey ayaa sheegay inay Ceeb iyo waxaan la fiirsan karrin ku tahay Puntland in dharaar Cad somaliland ay qabsato dhul Puntland maamusho. “Shalay waxaa tagtay Sool, Maantana waxaa Tagaysa Sanaag “ Ayuu yidhi.
Wuxuu ugu baaqay Madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdullahi DENI inuu Booqdo Gobolka sanaag oo Xiisad u dhaxaysa Labada maamul ay hada kasoo Cusboonatay.
“Waxaan leeyahay Madaxwayne DENI Hogaami Bulshada, oo Muuqaalka aad bixisay mid ka duwan Bixi, Oo Puntland difaac “ Ayuu hadalkiisa Raaciyey.
Arintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhowaan ciidamo ka tirsan Somaliland ay Fadhiisimo Cusub ka samaysteen deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag, Arintaasi oo Siwayn ay Puntland uga Cadhootay.
Warsangelii iyo Dhulbahantihii dhulka lahaa ayaa Isaaqa hoosta kala shaqeeya, Majeerteen ma difaaci karo dhul ninkii lahaa dhacayo.
Waadna arkin Sanaag kama sokaynayo Sool.
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland waa reer Yube, bal intaas ka feker.
Haddii la rabo xuduud qabiil waa in qabiil walba dhulkiisa difaacdo ama Puntland loo ogolaado in marka dagaal gasho la oran shacab baa la xasuuqay.
Hore u dhacday Galkacyo ayaa kuwo Leelkase oo Sacad iyo Alshabaab la shaqeeya damceen in magaalada qabsadaan.. waa tii Faroole digada ka dhigay….Taleex waa tii markii damcay in sidii Galkacyo yeelo ilaa maanta xasuuqbaa dhacay laga hadlayo oo calankii Somaliland maanta suran yahay.
Dhul ninkiisii baa difaaci kara.
Majeerteenow kaalaya dagaalama oo dhulka difaaca…. yaa dabbaal ah oo duurka loo dirayaa.
War runta isku sheega oo xal u hela dadka dhulka iibsanaya.
Puntland waxay ugu badisaa in Sool iyo Sanaag ka harto, waxa qarash iyo dhib ka gala malayn kari maysid… Bal aan aragno in Iidoorka citiraaf ku helayaan…. I don’t beleive that.
Maalin walba horgale dhaaranaya oo dhulkoosii Isaaq kusoo hogaaminaya inta lacag soo qaatay shacabkana u sacbinayaa sidii Xaqletoosiye, Cali Khalif iyo hadda qoladaan Warsangeli oo booskii Dhulbahante galay.
Soo wada Iidoorka bal cidda caano ka dhanta.
Dhulbahante iyo Warsangali waxaa ku kalifay in ay
iidoor u galaan selfish nimada majeerteenku caanka ku yihiin. haddii Dhulbahante iyo warsangali oo dad ugu xiga ka aamin baxeen, yaa kaloo aaminaya.
iidooor oo dad uguliita ayaa maalinba meel ka qabsanaya, jawaabta puntland waxay ku soo ururtay car kaalaya garoowe!!! war illeen ceeb iyo gunnimo looma dhinto, majeerteen wixii lagu xamanjiray baa banaanka yimid, Fulaynimo!!, nin aan dhulkiisa difaacan karin ma mudna in wax la weydiiyo.
Caawa ma ahayn in Puntland hadasho waxay ahayd beesha dhulka degta ay warkooda cadeeyaan, maalinta Isaaq dhulkooda ku laayo aan aragno oo Puntland ku daawato.
Nin tuuladiisii shaar Somaliland gashan oo qori sita, ka waran…
Wuxuba waa Benjamin babies.
Give me a break.🙃
Anigu horaan kuula hadlay qof daciifa baatahay war intaad arkayso shgaqsiyaadka
Hargeysa kaqaylinaya maxaad u arkiweydey caare oo aktaada kuhaysta boqolaal ciidana iyo tikniko maad ku shaqaysid isaga oo ciidamo degaanka u dhashay oo aan laguu qabsan ku shaqaysatid intaad niicdaa hayso oo ilaa wakhti fog aad leedihiin beeluhu hays difaaceen puntland miyaanay maamul lasiman ahayn kan snm miyuu kaa dhaqaalo badanyahay maxaa fuleynimada horta idiinku wacan subxaanalaah
Shacabka Dhulbahante iyo Warsangeli midna iidoor in uu dhulkooda qabsado ma rabo mana jecla laakiin waxaa ku Jira niman lacag lagu kala iibsanayo oo aan tiro badnayn oo calooshooda u shaqysanaya.iidoorna wuxuu u rabaa magacaas keliya in uu iska hor mariyo lacagtana siiyo ee dan kale iyo jacayl midna kama leh iidoor nin daarood !!!!!
Daanyeerkan wuu iska hadlay waana warlord.
Haddii ay Soomaalinnimo ku jirto nabad buu ka shaqayn lahaa illayn Iidoorkuba waa Soomaali doonaya Soomaaliinom save inta mooryaanta jeegaanta qudha mooyee
Sanaag waa degaan Soomaaliyeed. Iyaga iyo Sool waa inay maamul beeleed la mid ah beelaha kale dhistaan waana Khaatumo state,
Anigoo Soomaaliwayn heli kara maxaa qabiil yar igu xayndaabay
Allow u naxariiso Max’ed Siyaad,
Anigu reer hargaysa ayaa ahay waxa an oo dhana waan ku dawakhay …
Qaar qab yaa lad daa rood nimo wada ..qaar somaliland nimo qab yaal a days an wata …
Waar ninyaw duul culimo waashay ma a ragtag y(alif wax buu Lee yay iyo waxba maleh)
-malaa maama malyuun wax a Halkaa gaadhsiiya y wax yar maaha. .
Marbaan idhi tabaada aduun toogo inan kaa ga ( cabdi gahayr gabay)